အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် လူထုလှုပ်ရှားမှု – လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန
မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် စံတန်ဖိုးများ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် လူထုလှုပ်ရှားမှု
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ - 2021-10-13
ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးအန္တရာယ်မှာ သဘာဝဘေး သာမက လူကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဘေးပါ ပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ မုန်တိုင်း၊ ရေကြီး၊ ငလျင်စတဲ့ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်တွေနဲ့ တောက်လျှောက် ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာပါ။ ယခုအခါမှာတော့ ကိုဗစ် ရောဂါ ကပ်ဘေးဒဏ်အပြင် အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဘေးဒဏ်ကိုပါ ဆိုးဆိုးရွားရွား ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ နေရပ်စွန့်ခွာရသူတွေလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ ဧပြီလ ကနေ ယခု လက်ရှိ အချိန်ထိ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ ပမာဏက ၁.၅ ဘီလီယံကျော် ရှိသွားပါပြီ။ အဲဒီထဲက ၉၅%ဟာ စစ်ကောင်စီကြောင့် ဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေဆီ ထောက်ပံ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၅%ခန့်သာ သဘာဝဘေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ အာဏာသာ မသိမ်းခဲ့ရင် ဒီ ၁.၄၅ ဘီလီယံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးစနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် တည်ဆောက်မယ့်နေရာမှာ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေနိုင်မယ့် ပမာဏပါ။ ဒါက အာဏာသိမ်းမှုဟာ ဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးမှာ ဘယ်လို ထိခိုက်သွားစေလဲဆိုတဲ့ ဥပမာတွေထဲက တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်ကောင်စီရဲ့ ပြင်းထန်စွာ ထိုးစစ်ဆင်မှုကို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေမှာ စစ်ဘေးဒဏ်ကို ပိုမို ခံစားနေကြရပြီး လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အများအပြားလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ အဲဒီဒေသတွေကို တတ်စွမ်းသမျှ ဦးစားပေးထောက်ပံ့နေပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတုန်းပါ။အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းမှသာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေ ဒီ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ လျော့နည်းပပျောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနက စစ်ဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ ဒေသအသီးသီးက စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူတွေအတွက် စိတ်အား လူအား နှစ်ခုလုံးနဲ့ စာနာထောက်ထား အားပေးကူညီတာတွေ ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြရင်း DRRDay campaign မှာ ပါဝင်လိုက်ရပါတယ်။
Only together, can we save the planet!
Only together, can we win the democracy!
Copyright © 2022 လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန